Thwebula HitmanPro 3.8.0.295 – Vessoft
Isigaba: Isithwebuli se-antivirus
Ikhasi elisemthethweni: HitmanPro
HitmanPro – Umbuso indawo zanamuhla ziqinisekise ngokusebenzisa ubuchwepheshe ifu. Isofthiwe uyakwazi ukuthola asuse bot, izikelemu, trojans, rootkits, izithasiselo viral, spyware kanye adware. HitmanPro iqoqa ulwazi futhi uqhuba le yokuziphatha idatha analysis ukukhomba futhi asuse izinhloso ezisolisayo ngezigaba eziningana. HitmanPro isebenzisa computer ekuholeni unqulo wesi arab developers software okuyinto zigcinwa isitoreji ifu software, ukuhlinzeka scan eqhelile computer yakho ngqo kusuka zenkampani. HitmanPro isekela kwethulwa kanye ukuqinisekisa uhlelo kusukela flash oshayelayo, ama-CD noma inethiwekhi linamathele storages.
Ukukhomba izinsongo ezinhlobo ezehlukene
Ukusebenzisa ubuchwepheshe ifu
ukuhlaziywa zokuziphatha software
Ukudalwa angabanjwa ngaphambi yokuqinisekisa
Launch kusukela kusitoreji idatha
Amazwana ku HitmanPro
HitmanPro software ehlobene
Ukuvikelwa okuphelele, Antivirus
Isofthiwe wemfanelo wokuvikela idatha yomuntu siqu ngokumelene izinsongo inethiwekhi. Antivirus inikeza isivikelo malware kanye spyware.
Isofthiwe ukuthola nokususa amagciwane. Isofthiwe ikuvumela ukuba scan system wakho ngezinhlobo ezahlukahlukene amagciwane, spyware, kanye nezinye izingozi.
Avira 15.0.36.211 Antivirus...
I-antivirus ethandwayo yokuvikela uhlelo ngokumelene nezinsongo ezihlukahlukene namagciwane. Isofthiwe iyakwazi ukuvimba ama-robot wenethiwekhi nokuvimbela ukufinyelela kumawebhusayithi kubantu abadala.
Ithuluzi ukuvikela ngokumelene amagciwane, spyware kanye rootkits. Isofthiwe inikeza ukuhlala ephephile ku-inthanethi futhi uhlola traffic for izinsongo kunokwenzeka.
I-antivirus eyinkimbinkimbi enezinga elifanele lokuvikelwa yenzelwe impendulo ephumelelayo kumagciwane anamuhla nezinhlobo ezahlukene zokusongela kwe-intanethi.
Ithuluzi Onamandla ukuthola izinsongo ezifihliwe futhi asuse spyware enonya. The Umbuso isebenzisa ubuchwepheshe ifu ukuvikela ngesikhathi sangempela.
Ithuluzi lenziwe ngendlela yokuba libone futhi asuse amamojula ukukhangisa. Isofthiwe ngempumelelo ususa wamathuluzi, amayunithi yandiswe engadingeki.
Isofthiwe ukususa amagciwane, trojans kanye spyware. Isofthiwe aqalaze for the izinsongo ukuthi waba uhlelo a umphumela usebenzisa inethiwekhi.
Ithuluzi okukhulu ekunqandeni ngokumelene amagciwane of izinhlobo ezahlukene. Isofthiwe isebenzisa ubuchwepheshe obehlukene ukuhlonza izinsongo futhi kwenza ukuwasusa kalula.
Antivirus, Isithwebuli se-antivirus
Le antivirus isekela ubuchwepheshe besimanje sokuvikelwa kwewebhu futhi isusa isofthiwe engathandeki futhi ivimbela i-malware.
Lena ithuluzi elikhulu elisekela ubuchwepheshe befu ukuze kube nezinga elengeziwe lokuvikela ikhompyutha ngaphezu kwesisombululo se-antivirus esiphelele.
Open Broadcaster Software 21.1 futhi 0.659b
Popular ithuluzi ukusakaza emfudlaneni abezindaba ku-intanethi. Isofthiwe isekela izilungiselelo ukusakaza ukukhulisa izinga video.
Ithuluzi ukuxhumana emhlabeni virtual 3D. Isofthiwe isebenzisa izinhlamvu 3D yokujwayelana abasebenzisi.
Isidlali semidya nge iqoqo imisebenzi ewusizo futhi amathuluzi. Isofthiwe ikuvumela ukulanda amavidiyo kusukela popular video amasevisi.